ကျမ်းစာကို သင်ယူလေ့လာပါ။ ကျမ်းစာအစီအစဉ်ကို မှာယူပါ။ YouVersion အကောင့်ထဲဝင်ရန် | ကျမ်းစာအက်ပ် | Bible.com
ဤသည်မှာ သင်တွေ့ရှိရန်မျှော်လင့်ထားသည့် YouVersion ၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးကို လွှမ်းခြုံသော သီးသန့်ပေါ်လစီနှင့်သုံးစွဲမှုစည်းမျဉ်းများ အကျဉ်းချုပ်ဖြစ်ပါသည်။:
သင် YouVersion အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးသည့်အခါ (သို့) ကျွန်ုပ်တို့၏အက်ပ်(သို့)ဝက်ဘ်ဆိုက်များ တစ်ခုခုအသုံးပြုသည့်အခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းသည့်သတင်းအချက်အလက်များသည် ပိုပြီးကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆန်သည့် ကျမ်းစာအတွေ့အကြုံများပေးစွမ်းနိုင်ရန် ဆိုသည့်ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်သာဖြစ်ပါသည်။
မွမ်းမံထားတဲ့ပေါ်လစီများက သင့်ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုကနေ ဘယ်လိုအချက်အလက်အမျိုးအစားတွေကိုစုဆောင်းနေသလဲ၊ အဲဒီအချက်အလက်တွေကိုအသုံးပြုပြီး သင့်ရဲ့ YouVersionအတွေ့အကြုံကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်ဖို့ ဘယ်လိုအသုံးပြုနေသလဲဆိုတာကို ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားပါတယ်။.
မှတ်သားဖို့လွယ်ကူတဲ့သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကို မည်သည့်တတိယမြောက်အဖွဲ့အစည်း ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ (သို့) ကြော်ငြာကွန်ယက်များ နှင့်မျှဝေခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မလုပ်ဆောင်ပါ။ တကယ်တော့ YouVersion သည် အကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သည့်သာသနာအဖွဲ့အစည်းဆိုသည်ကို သင်သိပါသလား။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်သည်မှာ သာသနာပြုခြင်းဖြစ်ပြီး၊ အချက်အလက်တွေကိုရောင်းချ (သို့) YouVersion ထုတ်ကုန်တွေထဲမှာကြော်ငြာတွေထဲ့ပြီး ငွေကြေးဖန်တီးရယူဖို့မဟုတ်ပါ။
ဒီအချက်အလက်များကို ထုတ်ဝေလိုက်သောအခါ သင်၏ ကိုယ်ရေးသီးသန့်အချက်အလက်များကို မဖော်ပြဘဲ ခြုံငုံသဘောဖြင့်သာ ဖော်ပြရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုမျှမက၊ သင်၏အချက်အလက်များကို ကာကွယ်ရန် မိမိကိုယ်ကို ကာကွယ်သော လုပ်ငန်းစံလုံခြုံရေးစနစ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ကြပါသည်။.
ဒီအချက်အလက်များကို ထုတ်ဝေလိုက်သောအခါ သင်၏ ကိုယ်ရေးသီးသန့်အချက်အလက်များကို မဖော်ပြဘဲ ခြုံငုံသဘောဖြင့်သာ ဖော်ပြရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုမျှမက၊ သင်၏အချက်အလက်များကို ကာကွယ်ရန် မိမိကိုယ်ကို ကာကွယ်သော လုပ်ငန်းစံလုံခြုံရေးစနစ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ကြပါသည်။
ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များကို ရယူခြင်း၊ ဝေမျှခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း​ အပါအဝင် YouVersion ကိုအသုံးပြုသောအခါ သင့်မှာ ရှိသောအခွင့်အရေးများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ပေါ်လစီက ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖြစ်စေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အချက်အလက် စုဆောင်းခြင်းနည်းပညာများကိုလည်း ထားရှိ၍ YouVersion အသိုင်းအဝိုင်းသည် ကျမ်းစာနှင့် အပြည့်အဝ ထိတွေ့မှုရှိရန် ကူညီပေးပါသည်။.
ငါ YouVersion ကျွန်မရဲ့ကျမ်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပိုမိုနက်ရှိုင်းဖို့ကျွန်မကိုအီးမေးလ်များကိုပေးပို့ကြကုန်အံ့သဘောတူသည်။.